एक दूरदर्शी नेताको स्मरण – Chitwan Post
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता एवम् समाजवादी चिन्तक बीपी कोइरालाको ३७औँ स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । हरेक वर्षको साउन ६ गते नेपाली कांग्र्रेसले आफ्ना प्रभावशाली नेताको स्मृतिमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ स्मरण गर्ने गर्छ । तथापि, बीपी स्मृति दिवसको उत्साह भने घट्दै गएको छ । केही औपचारिक कार्यक्रम गरेर मात्रै बीपीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुँदैन । बीपी कांग्रेसका मात्र नेता नभएर आमनेपालीका जनप्रिय नेता हुन् । उनी जहानियाँ शासनविरुद्धको विसं २००७ सालको जनक्रान्तिका नायक, देशको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, राष्ट्रवादी राजनेता, प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्व, समाजवादी चिन्तक र वरिष्ठ साहित्यकार पनि हुन् । आज नेपाली समाज परनिर्भरतामा बाँच्नु परेको छ । धान–चामल, तरकारी–फलफूल, घिउ–तेल, चिनी, मसलादेखि दैनिक उपभोग्य सामग्री भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने नियति छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादन बढाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । अहिले समय फेरिएको छ, तर नियति फेरिएको छैन । बीपीले आफ्नो समयमा हरेक नेपालीलाई बस्ने एउटा बास, अलिकति अन्नपात, दूध खान एउटा गाई होस् भनेका थिए । यो आत्मनिर्भरता झल्काउने समाजवादी आदर्श थियो । तर, उनको आदर्श न कांग्रेसले अनुशरण गर्न सक्यो, न राज्यले ।
बीपीले योजना आयोगको कार्यकक्षमा हलो जोतिरहेको किसानको तस्बिर किन राख्न लगाएका थिए ? स्मार्ट सिटी होइन स्मार्ट गाउँ बनाउने बीपीको आदर्श आजपर्यन्त उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । बीपीको समाजवादलाई भजाएर कांग्रेसले धेरै वर्ष मुलुकको नेतृत्व ग¥यो । तर, किसानलाई गाईभैँसी पाल्न र खेतबारी उर्बर बनाएर उत्पादन बढाउन कांग्रेसले सिकाएन, बरु परम्परागत किसानी पेसा अंगाल्ने दाजुभाइहरु वैदेशिक रोजगारीका नाममा खाडी मुलुकमा श्रम बेच्न बाध्य भए । आज परिणाम के भयो ? गाउँ रित्तिए, खेतबारी बाँझो पल्टिए, परनिर्भरता बढ्यो । बीपीको आदर्श र समाजवादी चिन्तन कांग्रेसका लागि राजनीति गर्ने माध्यममात्र बन्यो । बीपीको देहवसानसँगै बीपीको समाजवाद किताबका पानामा सीमित बन्यो । कांग्रेसले केही औपचारिक कार्यक्रम गरेर प्रक्रिया पूरा गरिरहेको छ । कांग्रेसले आफ्ना अग्रज नेताको स्मृतिमा जति उत्साह देखाउनु पर्दथ्यो, त्यो नदेखिनु विडम्बनापूर्ण छ । बीपी र प्रजातन्त्र नेपालको सन्दर्भमा एकअर्काका पर्यायजस्तै मानिन्छन् । सम्पूर्ण देशले नै प्रजातन्त्रका लागि आफूलाई बलिदान दिएको महान् नेताका रूपमा उनलाई स्वीकार गरेको छ । नेपाली राजनीतिका शीर्ष पुरूष बीपीले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन खेलेको भूमिकालाई कसैले नजरअन्दाज गर्ने भूल गर्नुहुँदैन ।
राणाकालको उत्कर्षको समयमा नेपाली कांग्र्रेसको स्थापनादेखि लिएर त्यस व्यवस्थाविरुद्ध उनले गरेको संघर्षबाट प्राप्त सफलता अहिले धेरैका लागि अनुकरणीय बनेको छ । २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्र्रेसले अत्यधिक बहुमत हासिल गर्दा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीले नेपालमा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न ठूलो योगदान गरेका थिए, जुन इतिहासले सगर्व मूल्यांकन गर्दै आएको छ । जीवनको उर्बर समय स्वदेशमै जेल जीवन भोगेका बीपी २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर भारतको निर्वासनबाट स्वदेश फर्किएलगत्तै नेपालमा नया“ युगको सूत्रपात भएको थियो । बीपीजस्तो दूरदर्शी नेतालाई त्यतिबेला सम्पूर्ण रूपमा देशले चिन्न नसकेको अवस्था भए पनि उनको अभाव अहिले निकै महसुस हु“दै गएको छ । उनको देहवसानपश्चात् बीपीको जस्तो विशिष्ट उचाइका नेता नेपालमा जन्मिन सकेका छैनन् । बीपी बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थिए । उनले नेपाली साहित्यमा पु¥याएको योगदान राजनीतिमा दिएको देनभन्दा कम मान्न सकि“दैन । खासगरी, नेपाली उपन्यास र कथाका क्षेत्रमा विशिष्ट मोड दिन सफल स्रष्टा व्यक्तित्व बीपीको साहित्यिक लेखन आजपर्यन्त उत्तिकै प्रभावशाली छ । शताब्दीमा मात्र जन्मिन सक्ने यस्ता महान् व्यक्तित्वलाई नियतिले लामो समय रहन दिएन । क्यान्सरजस्तो घात रोगबाट विसं २०३९ मा उनको निधन भयो । उनको अभाव सिंगो नेपाली राजनीति र साहित्यिक क्षेत्रमा महसुस हुँदै आएको छ । महान् नेता बीपीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली !